Mpanamboatra taratasy fitaratra acrylic solila avy any China | Gokai
ravina akrilika fitaratra volamena
Takelaka fitaratra akrilika, mandray soa avy amin'ny maivana, ny fiatraikany, tsy mahazaka, mora vidy ary mateza kokoa noho ny vera, ny takelaka fitaratra akrilika azontsika ampiasaina ho solon'ny fitaratra fitaratra nentim-paharazana ho an'ny rindranasa sy indostrialy maro.
Takelaka fitaratra akrilika, mandray soa avy amin'ny maivana, ny fiatraikany, tsy mahazaka, mora vidy ary mateza kokoa noho ny vera, ny takelaka fitaratra akrilika azontsika ampiasaina ho solon'ny fitaratra fitaratra nentim-paharazana ho an'ny rindranasa sy indostrialy maro. Toy ny acrylics rehetra, ny takelaka fitaratra akrilika azontsika voakapa mora, atsofoka, foronina ary vita tamin'ny laser. Ny takelaka fitaratra misy karazany maro loko, hateviny ary habe, ary manolotra safidy fitaratra azo refesina.
Anaran'ny vokatra Takelaka fitaratra akrilika / Takelaka akrilika fitaratra ara-nofo 100% fitaovana PMMA Virjiny
Marika GOKAI Color Volamena, volafotsy, volamena rose, manga, mena, volomboasary, varahina, mainty sns ary ny loko fanao misy
Size 1220 * 2440mm, 1220 * 1830mm, fatra voafetra hateviny 0.75-8 mm
Masking Sarimihetsika PE Fampiasana Haingo, dokam-barotra, fampirantiana, asa-tanana, kosmetika, fiarovana sns.
hakitroky 1.2 g / cm3 MOQ 100 ravina
Fotoana santionany 1-3 andro Ora nanomezana 10-20 andro aorian'ny nahazo petra-bola
Fananana ara-batana sy fahaiza-miasa amin'ny takelaka fitaratra acrylic:
Ny takelaka akrilika fitaratra dia misy amin'ny sarimihetsika sarimihetsika thermoformable vaovao ho an'ny fanodinana mora sy fiarovana ambony. Ny takelaka akrilika dia azo hafanaina, aolaka aodika na haody laser miaraka amin'ny saron-tsarimihetsika miaro mahery.
Mekanika Faharetana amin'ny sintona D638 10.300psi
Modulus Tensile D638 600.000psi
Elongation mahery D368 4,20%
Tanjaka fitaritana D790 18,3000psi
Modulus Flexural D790 535,000psi
Izod Impact (Voamarika) D256 > 0.20
henjana, Rockwell M D785 M-103
Optical Famindrana maivana D1003 92%
zavona D1003 1,60%
Fanondroana refraktika D542 1.49
Index Yellowness - +0.5 Voalohany
mafana Tempa fitetezana hafanana. D648 (264psi) 194 ° F
Coefficient ny fanitarana D696 6x10-5in / in ° F
* Ny loko eo amin'ny efijery dia mety tsy maneho taratra tena izy amin'ny takela-batana.
* Haben'ny habe, loko ary hateviny misy.
* Ny loko, lamina na habe tsy-Stock dia mety mitaky lamina farafahakeliny farafaharatsiny.
* Azo rakofana mateza tsy azo atrehana.
* Manasongadina ny fonosana miaro henjana indrindra an'ny indostria.
* Ny takelaka akrilika fitaratra rehetra dia omena salan'isa 1 "amin'ny halavany sy ny sakany.
Fampiharana ny Board Glossy PVC ho an'ny fanaka
Ny takelaka fitaratra akrilika ataontsika dia mety amin'ny fampiharana marobe. Betsaka ny fampiasana mahazatra, miaraka amin'ny tetikasa malaza indrindra amin'ny fividianana teboka, fiarovana, fanatsarana tarehy, ranomasina, ary maotera, ary koa fanaka haingon-trano sy fanaovana kabinetra, signage, fametahana POP / antsinjarany / fivarotana, ary fampirantiana ary haingon-trano sy ny fampiharana ny endrika anatiny.
Manolotra famolavolana fitaratra plastika hafa koa izahay ho an'ny fampiharana toy ny:
* Fampiharana an-dranomasina izay mahazaka hamandoana
* Fitaovana fanoherana ny zavona izay tsy ho zavona rehefa mangatsiaka
* Fitaratra voalohany tsy misy taratra matoatoa
* Jereo amin'ny alàlan'ny fitaratra izay ahafahan'ny efitrano maizimaizina mijery ao amin'ilay efitrano maivana kokoa
* Fitaratra roa misy fitaratra mavesatra noho ny mahita amin'ny alàlan'ny tolotra
* Famonoana mahazaka abrasion izay matetika ampiasaina amin'ny fametrahana fivezivezena be
* Taratasy plastika ho an'ny famantarana na fampiharana rindrina
* Fitaratra shower / locker, ary profil hafa momba ny haingon-trano
* Ny andaniny roa dia rakotra taratasy kraft na horonantsary PE amin'ny faritra fiarovana.
* Sahabo ho 2000kg isaky ny paleta. 2 taonina isaky ny lovia.
* Paleta hazo eo ambany, misy fonosana horonantsary fonosana manodidina.
* Kaontenera 1 x 20 'mamoaka 18-20 taonina.
Teo aloha: taratasy fitaratra akrilika adhesive
Manaraka: takelaka pmma
Takelaka fitaratra acrylic akaikiko
Vidin'ny takelaka fitaratra acrylic
Taratry akrilika fitaratra zaridaina
Takelaka akrilika fitaratra
taratasy fitaratra akrilika adhesive
ravina fitaratra akrilika 4 × 8